70620 NINJAGO ဖြစ်ပါတယ် CITY LEGO modular အဆောက်အ ဦး လား။
28 / 08 / 2017 27 / 08 / 2017 ဒံယလေက 3735 Views စာ0မှတ်ချက် 10232 နန်းတော်ရုပ်ရှင်ရုံ, 70620, ၇၀၆၀၇ NINJAGO City, လိုက်ဖက်တဲ့, Creator Expert, D2C, အထူးအခွင့်အရေးရှိသော, စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး, Lego, Lego Creator Expert, Lego Ninjago, modular, မော်ဂျူးလ်အဆောက်အ ဦး, မော်ဂျူးလ်, Ninjago, Ninjago City, shop.LEGO.com, LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင်
အဆိုပါများ၏အဓိကလုပ်ငန်းအစုံ Lego Ninjago ရုပ်ရှင်လိုင်းမှာသူနဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိ၊ မရှိဆိုတာကိုလူအများကသိချင်နေကြတယ် Creator Expert မော်ဂျူးလ်ဆောက်လုပ်ရေးလိုင်း - Brick Fanatics အဖြေကိုရှာဖွေစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်
အဆိုပါ modular အဆောက်အ ဦး စီးရီး၏အခြားပရိသတ်များကဲ့သို့ပင်, ငါအတွက်အကြီးမားဆုံးအစုံ၏ဓာတ်ပုံများကိုသောအခါငါချက်ချင်းစိတ်ဝင်စားခဲ့သည် Lego Ninjago ရုပ်ရှင်လိုင်း ၇၀၆၀၇ NINJAGO City, ပထမ ဦး ဆုံးဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်း၏မယုံနိုင်လောက်အောင်အသေးစိတ်အဆင့်များဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားခြင်း မှလွဲ၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရွယ်အစားနှင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအရည်အသွေးမြင့်မားကျွန်ုပ်သည်အခြားအကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်စိတ် ၀ င်စားပါသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ Modular Building layout နှင့် တွဲ၍ ထည့်နိုင်သည် 10243 Parasian စားသောက်ဆိုင် or 10251 အုတ်ဘဏ်?
ဒီဖြစ်နိုင်ခြေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ကျွန်တော်ဆောက်လုပ်မှုပြီးတာနဲ့တော်တော်လေးလုပ်ခဲ့ပါတယ် ၇၀၆၀၇ NINJAGO City။ ငါဖြစ်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်းကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအချို့လိုအပ်သည်။
ဒီဇိုင်နာများမှာ Lego ဒီအစုံကိုဒီဇိုင်းဆွဲသောအခါ Group သည်စိတ်ထဲတွင် modular များရှိသည်။ ၇၀၆၀၇ NINJAGO City စံသတ်မှတ်ထားသော 32 x 32 baseplate ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည် Creator Expert မှလွဲ။ အစုံ 10255 ညီလာခံရင်ပြင်။ ၎င်းတွင်ခိုင်ခံ့မြဲမြံစွာတည်ဆောက်ထားသည့် pin နှင့် hole connection connection point များပါ ၀ င်ပြီး modular တိုင်းက အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့အခြေစိုက်စခန်းတွင်အတူတကွပူးပေါင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Ninjago City ထို့အပြင် modular အဆောက်အ ဦး ၏တူညီသောအခြေခံ layout ကိုရှေ့တွင်လမ်းဘေးနှင့်အဆောက်အ ဦ များ st နှင့်အတူအောက်ပါအတိုင်းartနောက်ကျော baseplate ၏အစွန်းမှရှစ်ပြား ing ။
အတူတူယူ, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို 70620 နည်းပညာပိုင်းမဆိုတည်ဆဲ modular နှင့်အတူပူးပေါင်းနိုင်ဆိုလိုသည်။ သို့သော်အခြေခံသဟဇာတဖြစ်ခြင်းသည်၎င်းသည်သာယာလှပသောအိမ်ထောင်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။
ကာကွယ်တားဆီးသောအဓိကပြissuesနာနှစ်ခုရှိသည် ၇၀၆၀၇ NINJAGO City အခြား modular တစ်ခုလွယ်ကူသောဆက်သွယ်မှုကိုပူးပေါင်းခံရ။ ပထမနှင့်အထင်ရှားဆုံးမှာအမြင့်ဖြစ်သည်။ မော်ဒယ်လ်အဆောက်အ ဦး များသည်သူတို့၏လမ်းဘေးစင်္ကြံများအတွက်အခြေခံပြားအမြင့်အထက်တွင်တင်းကျပ်သောအတုံးတစ်ကွက်ကိုစောင့်ကြည့်သည်။ အမှန်မှာ၊ modular ခေါ်ဆိုမှုအားလုံးနီးပါးသည်လမ်းဘေးလမ်းကြောင်းကိုညွှန်ကြားချက်စာအုပ်၏ပထမစာမျက်နှာများတွင်တည်ဆောက်ရန်၎င်းတို့အားအမြဲတမ်းပထမအလွှာဖြစ်သောကြောင့်တောင်းဆိုရန်ဖြစ်သည်။
၏ကျယ်ပြန့်မြို့ပြ Ninjago Cityမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်းပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှအနိမ့်ဆုံးအဆင့်မြင့်အဆောက်အအုံများကြားတွင်ရေငန်တူးမြောင်းများပါဝင်သည်။ ဤမြေမျက်နှာသွင်ပြင်သည်ဤနေရာတွင်ထင်ဟပ်လျက်အနိမ့်ဆုံးအလွှာ ၇၀၆၂၀ ကိုရေတွင်မြှုပ်နှံထားသည်။ လိုအပ်ချက်အနေဖြင့်၎င်း၏ပထမအဆင့်လမ်းလျှောက်မှုများသည်ရေအထက်တွင်မြင့်တက်နေပြီးအုတ်နှစ်ခုနှင့်သုံးခုအကြားရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် modular မှတက် join နိုင်ပါတယ်နေစဉ် 10232 နန်းတော်ရုပ်ရှင်ရုံ, လမ်းဘေးစင်္ကြံနှစ်ခုကြားအကူးအပြောင်းနှင့်အတူအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်မှာရှိပါတယ်။
ရေကိုယ်နှိုက်ကအခြားအဓိကပြproblemနာဖြစ်သည်။ အဆောက်အအုံတစ်ခု၏ရှေ့မှောက်၌စမ်းရေကန်တစ်ခုသို့မဟုတ်ငါးကန်ငယ်တစ်ခုကဲ့သို့ရေမျက်နှာပြင်ကိုအလှဆင်ပစ္စည်းများအဖြစ်အလွယ်တကူဖြတ်သန်းသွားနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယင်းသည်မဖြစ်သင့်ပါ။ ပထမ ဦး စွာ ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်မှတ်ချက်ချသည်အတိုင်းကွဲပြားခြားနားသောရောင်စုံပြားများပေါ်မှကြည်လင်ပြာပြာသောကြွေပြားများခင်းခြင်းဖြင့်ရေထဲ၌အံ့သြဖွယ်နက်ရှိုင်းသောထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသည်။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအမြင်အာရုံတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ကြွေပြားရေမျက်နှာပြင်ကိုဆိုလိုသည်art၎င်းကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မယ့်အစား baseplate အထက်တပန်းကန် s ။ ထို့ကြောင့်၊ ရေသည်စံမော်ဂျူလာ၏လမ်းဘေးစင်္ကြံထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ တကယ့်ကမ္ဘာကြီးတွင်ရေသည်နေရာအနှံ့သို့စီးဆင်းသွားနိုင်သည်။
၎င်းသည်အစုကိုနောက်ကျောပတ်လည်ရှိအခြား modular များနှင့်အတူကောင်းကောင်းထိုင်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ မော်ဂျူးအများစုတွင်အခြေခံကျောနောက်ဘက်ရှိနောက်ကျောခြံareaရိယာရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အနည်းငယ်သာ 10255 ညီလာခံရင်ပြင် သို့မဟုတ် 10224 မြို့တော်ခန်းမကိုညာဘက်အောက်ခြေ၏နောက်ကျောတွင်တည်ဆောက်ထားသည်။ ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ၎င်း၏နောက်ဘက်အများကြီးရေမှမြှုပ်နှံ။ ၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော်လည်းအခြားအဆောက်အအုံများနှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါနယ်နိမိတ်ပြတ်တောက်နေသည်။ တပ်ဆင်ထားသည့်အပြင်အဆင်အားတပ်ဆင်လိုပါကရှေ့တွင်ရှိသကဲ့သို့ရေကိုထိန်းသိမ်းရန်အစွန်းကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအဖြစ်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
အချို့သောမော်ဂျူးအဆောက်အအုံများတွင်လသာဆောင်များပါဝင်ပြီးအများစုမှာအိမ်ခေါင်မိုးများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသော်လည်းမည်သူမျှထုပ်ပိုးထားသည့်အရာနှင့်မနီးစပ်ပါ ၇၀၆၀၇ NINJAGO City။ ကပ်လျက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပူးပေါင်းသောအခါလွတ်လပ်သောကျဆုံးခြင်း၌ရုတ်တရက်အဆုံးသတ်သွားသောလမ်းအဆင့်၌အပြည့်အဝပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်ပါဝင်သည်။ အဆုံးသတ်ကိုယ်ရံတော်များကအလွယ်တကူပြန်လည်ကုစားနေစဉ်, လမ်းများထွက်မတ်တပ်ရပ်နှင့်ဤအမှုကိုပြုသောအခါသိသာထူးဆန်းကြည့်ရှုပါ။
အပြည့်အဝမိမိဘာသာထိန်းချုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့်ခေါင်မိုးပေါ်ရှိအဆင့်သည်အနည်းငယ်ပိုကောင်းသည်။ ၁၀၂၂၄ မြို့တော်ခန်းမမှအပအခြားအဆောက်အအုံများအားလုံးအထက်တွင်မြင့်တက်နေသော်လည်းမော်ဂျူလာများသည်အများအားဖြင့်ကွဲပြားသောအမြင့်များဖြစ်သဖြင့်၎င်းသည်မြင်သာသောအမြင်မဟုတ်ပါ။
ဒီတော့ဒါက modular လား။
၇၀၆၀၇ NINJAGO City နှင့်အတူတူညီတွေအများကြီးဝေမျှပေးသည် Lego Creator Expert modular အဆောက်အ ဦး လိုင်းနှင့်ယခင်ထုတ်လုပ်မဆိုအဆောက်အ ဦ များနှင့်အတူပူးပေါင်းနိုင်ပါတယ်။ ဤအင်္ဂါရပ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဆက်သွယ်မှုသည်အချည်းနှီးသာဖြစ်သည်။ ဤအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဒီဇိုင်နာများသည်ဤကြီးမားသောအစုံကိုသဟဇာတဖြစ်စေရန်ရွေးချယ်လိုက်ခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာပင်။ ၎င်းအစား၊ ဆိုလိုသည်မှာဤကဲ့သို့သောအစုံလိုက်များရှိနိုင်ကြောင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာရှိပြီးသား modular line နှင့်ဆင်တူသော်လည်းအခြားတစ်ခုနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ ၏အရည်အသွေးနှင့်အတူ ၇၀၆၀၇ NINJAGO Cityဤအချက်သည်အမြစ်တွယ်နေသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည် city ပိတ်ပင်တားဆီးမှုလုံးဝအံ့သြဖွယ်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ် Lego Group ကမပြီးသေးဘူး၊ နောက်တော့ပရိသတ်တွေက start ဤနေရာတွင်နှင့် st အသုံးပြုသောစတိုင်ပေါ်တက် brushingart ဖန်တီးမှုတွေရလာတယ်…
၇၀၆၀၇ NINJAGO City ယခုမှာရရှိနိုင်ပါသည် shop.LEGO.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
နောက်ထပ် Lego Ninjago ရုပ်ရှင်သုံးသပ်ချက်များ:
70606 Spinjitzu လေ့ကျင့်ရေး
၇၀၆၀၉ Manta Ray ဗုံးကြဲလေယာဉ်
70610 ပျံ Jelly Sub
70611 ရေ Strider
70612 အစိမ်းရောင် Ninja ကို Mech နဂါး
70613 Garma Mecha က Man
70614 Lightning ဂျက်လေယာဉ်
70615 မီးသတ် Mech
70616 ရေခဲပြင် Tank
70617 Ultimate Ultimate လက်နက်၏ဘုရားကျောင်း
70618 Destiny ရဲ့ကျေးဇူး
← LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင် Minifigure Vignettes - Kai Kendo
LEGO ဟယ်ရီပေါ်တာသည် 2018 ခုနှစ်တွင်ပြန်လာမည်ဟုကောလဟာလများထွက်ပေါ် →